साउन मसान्तसम्म एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डको नाफा १ अर्बभन्दा बढी - Aarthiknews
साउन मसान्तसम्म एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डको नाफा १ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक म्यचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डले साउन मसान्तसम्म रू. १ अर्ब २२ करोड ५७ लाख नाफा गरेको छ । असार मसान्तसम्म योजनाको यो नाफा रू. ७२ करोड ९२ लाख ८४ हजार रहेको थियो । असार महिनाको तुलनामा योजनाको नाफामा बृद्धि भएको हो । यो अवधिसम्म योजनाको जम्मा आम्दानी रू. १ अर्ब २२ करोड ८४ लाख ६१ हजार र जम्मा खर्च रू. २६ लाख ९१ हजार रहेको छ ।
योजनाको प्राप्त भैसकेको आम्दानी रू. ७३ लाख २२ हजा रहेको छ भने प्राप्त भैनसकेको आम्दानी रू. १ अर्ब २२ करोड ११ लाख ३८ हजार छ । असार महिनाको तुलनामा साउन महिनामा योजनाको जम्मा आम्दानी बढेको हो । यस अवधिसम्म योजनाले धितोपत्रमा रू. ६५ करोड १५ लाख ३५ हजार लगानी गरेको छ ।
धितोपत्र दलाल कमिशन सहितको यो लागतको बजारमूल्य रू. १ अर्ब २१ करोड ९४ लाखभन्दा बढी रहेको छ । योजनाले रू. १२ करोड ३५ लाख भने मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ । असार मसान्तसम्म रू. १८ दशमलव ७५ रहेको योजनाको प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साउन मसान्तसम्म रू. २० दशमलव २२ पुगेको छ । यस योजनाले सात वर्षे अवधिको बन्दमुखी योजना २०७४ साल फागुन २८ गतेदेखि सञ्चालन गरिरहेको छ ।